I-Playa D'Oro Beach House - ikhaya eliseceleni kolwandle - I-Airbnb
I-Playa D'Oro Beach House - ikhaya eliseceleni kolwandle
Reitani, Sicilia, i-Italy
Indawo yokuhlala yangasese esogwini lwase-San Lorenzo, elinye lamabhishi athakazelisa kakhulu eningizimu-mpumalanga ye-Sicily, phakathi kwendawo engokwemvelo yase-Vendicari nedolobhana lasendulo lase-Marzamemi. Inakho konke ukunethezeka, inikeza ithala lokubuka ulwandle okuhlaba umxhwele. Indawo yokuhlala ihlelwe amazinga angu-2 + isisefo. Iphinde ibe namakamelo angu-2, igumbi lokuphumula, ikhishi elinakho konke, igumbi lokudlela, isisefo kanye nethala elibheke olwandle. Ibhishi elihle elinolwandle olucacile, ngaphansi kwendlu. Indawo ecebile ngamasevisi nezindawo zokugeza.
Ihlelwe ngamazinga amabili + isisefo, indlu ihlanganisa cishe u-100 sqm.
Indawo yokungena endaweni yokuphumula enefasitela lengilazi elibheke olwandle, i-balcony enkulu ebhishi, ikamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili, ikamelo lokulala elinombhede olala umuntu oyedwa, indlu yokugezela ephelele eneshawa, umbhede wosofa wabantu abangu-2 egumbini lokuphumula, igumbi lokugezela lesibili elinokufinyelela kwangaphandle.
esitezi esiphansi, itholakala ngezitebhisi. Indawo yokuphumula enikezelwe ezinhlotsheni zewayini okufanele zinambitheke.
Iphansi elingenhla Ngezinye izitebhisi ungena ESITEZI
esiphezulu lapho uzothola khona ikhishi elinakho konke, ifriji kanye ne-2-burner induction hob, igumbi lokudlela elinomoya oshisayo kanye nethala elinefenisha elinombono omuhle wolwandle nebhishi.
Ukusuka endlini ungaya ebhishi ngokufinyelela okuqondile.
I-San Lorenzo ingenye yama-resort afunwa kakhulu ngasolwandle endaweni yase-Noto, ngaphandle kwe-Marzamemi, idolobhana elihle lokudoba ogwini oluseningizimu-mpumalanga ye-Sicily. I-bay, ethatha igama layo endaweni, iphawulwe ngesihlabathi esinegolide namanzi aseCaribbean, ngaphandle nje kwesitoreji semvelo sase-Vendicari, indawo yemvelo nezilwane zasendle endaweni eseduze. Indawo inawo wonke amasevisi adingekayo: izindawo zokudlela, amabha asebhishi, izindawo zokugeza ezinemidlalo yamanzi, njll. Le ndawo eyipharadesi iyindawo ekahle kulabo abathanda ulwandle. Isifunda sase-Val di Noto sicebile ngezindawo zemvelo, zobuciko, zomlando kanye namasiko ezithakazelisayo, okungokwesikhathi sakudala. Idolobha lase-Noto, elingamakhilomitha angu-19, laziwa emhlabeni wonke, liyisibonelo sokulondolozwa okuhle kakhulu kwe-Sicilian Baroque, futhi liyatholakala emadolobheni aseduze ase-Syracuse, e-Modica, e-Ragusa nase-Scicli. Ibanga elifushane yi-Vendicari Oasis Nature Reserve, amahektha omhlaba ongahlalwanga, lapho kulula khona ukubhekana nezindawo ezihlaba umxhwele, amanxiwa emivubukulo, izitshalo eziminyene zaseMedithera ezivula ngokuzumayo olwandle olucacile, amabhishi amade egolide abe amawa abheke ulwandle olujulile. Futhi i-Marzamemi, idolobhana elihle lokudoba, indawo yemidwebo ehlukahlukene namafilimu, ingamakhilomitha angu-3 kuphela ukusuka endlini, lapho kukhona khona i-promenade enhle, izindawo zokudlela ezijwayelekile ezenziwe ngezitolo zabadobi ezindala, isikwele esinesimo kanye nemigoqo eminingana ebhishi. Uhamba cishe amakhilomitha angu-10 eningizimu, ungafinyelela e-Portopalo, enye idolobhana lokudoba. Kanye nogu oluseningizimu-mpumalanga ye-Sicily, isimo sezulu singu-Mediterranean, esinokuphakama okupholile. Le ndawo ihambisana ne-sirocco evamile, umoya ofudumele ovela e-Afrika, ongakhuphula amazinga okushisa asebusika afinyelela ku-20 ° C noma ngaphezulu, okwenza izivakashi zijabulele isimo sezulu esihle ngale kwehlobo elifudumele nelanga.
Sizotholakala nganoma yisiphi isidingo. Siyajabula futhi ukunikeza izivakashi zethu kusengaphambili ngawo wonke amacebiso awusizo okuhlala okujabulisa kakhulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Reitani namaphethelo